မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ဆောင်သောစိတ်ကျဆေး Antidepressants အသစ်သည်အလားအလာရှိသော serotonin 2C receptors ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့် dopamine ကိုတိုးပွားစေသည် (2013) - Your Brain On Porn
အစာရှောင်ခြင်းသရုပ်ဆောင်စိတ်မကျဆေး Antidepressants ၏တစ်ဦးကအလားအလာသစ်ကိုလူတန်းစား serotonin 2C receptors (2013) ပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့် dopamine တိုးမြှင့်
စိတ်ပညာ & စိတ်ရောဂါကုသမှုအတွက်အောက်တိုဘာလ 29, 2013 တွင်
1 အမေရိကန်များအတွက် 10 ထက်ပိုပြီးစိတ်မကျဆေး Antidepressants ယူ, ဒါပေမဲ့သူတို့ရောဂါလက္ခဏာတွေသက်သာရန်စတင်ကဤဆေးဝါးများရက်သတ္တပတ်-နှင့်ယူအချို့သောလူနာတွေအတွက်ရှေ့တော်၌, လအတွင်း-နိုင်ပါတယ်။ အခုတော့ချီကာဂိုတက္ကသိုလ်ကနေသိပ္ပံပညာရှင်များရွေးချယ်ပိတ်ဆို့ခြင်းတစ် serotonin အဲဒီ receptor မျိုးကွဲစိတ်ကျရောဂါများအတွက်ဟော်မုန်းတစ်ခုအလားအလာသစ်ကိုလူတန်းစားညွှန်း, ကြွက်များတွင်လျင်မြန်စွာသရုပ်ဆောင်လက္ခဏာသက်ရောက်မှု induces ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအလုပျ Molecular Psychiatry အတွက်အောက်တိုဘာ 29 ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။
ယနေ့စိတ်ကျရောဂါကုသမှုတွင်အကြီးမားဆုံးပြproblemsနာတစ်ခုမှာကုထုံးဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများနှောင့်နှေးခြင်းဖြစ်သည်။ ပိုမိုမြန်ဆန်သောဆေးများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အလွန်လိုအပ်ကြောင်းချီကာဂိုတက္ကသိုလ်မှစိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံတွဲဖက်ပါမောက္ခ Stephanie Dulawa ကပြောကြားခဲ့သည်။
လက္ခဏာဟော်မုန်း၏နှောင့်နှေးစတင်ခြင်းကိုသိသိသာသာလူနာမကြာခဏထိရောက်မှုဆေးဝါးများအကြား switching လအတွင်းသုံးစွဲတဲ့သူကိုအဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါနှင့်အထူးသဖြင့်သူတို့အ impact နိုင်ပါတယ်။ လောလောဆယ်နှစ်ခုသာမူးယစ်ဆေးဝါးများ-ketamine နှင့် scopolamine-လျင်မြန်သောစတင်ခြင်းပြ။ ကြောင့်ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမှသို့သော်မကလူ့အသုံးပြုရန်သင့်လျော်သည်။
အစာရှောင်ခြင်း-သရုပ်ဆောင်ဟော်မုန်း၏အသစ်တစ်ခုလူတန်းစားရှာကြံခုနှစ်, Dulawa နှင့်သူမ၏အဖွဲ့သည်ယခင်ကလက္ခဏာသက်ရောက်မှု generate ပြခဲ့ပေမယ့်စတင်ခြင်း၏နှုန်းမှာအဘို့ကိုလေ့လာခဲ့ဖူးကြောင်းဇီဝလမ်းကြောင်းစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ သူတို့ဟာ serotonin receptors, serotonin များအတွက် binding မိတ်ဖက်ဖြစ်ကြောင်းကိုပရိုတိန်း, ခံစားချက်, memory နဲ့အစာစားချင်စိတ်ကိုထိန်းညှိပြသထားပါတယ်တဲ့ neurotransmitter ၏ကွဲပြားခြားနားသောမျိုးကွဲမှာကြည့်ရှုကြ၏။
ဤအမျိုးကွဲများ, serotonin 2C receptors ထွက်ရပ်နေ၏။ selection သာငါးရက်အတွင်းတွင်သိသိသာသာလျှော့ချစိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူတစ်ခုထိန်းချုပ်မှုလက္ခဏာဆေးဝါးများအတွက်နှစ်ပတ်အတွင်း၏နိမ့်ဆုံးမှနှိုင်းယှဉ်ကြွက်များတွင်ဤ receptors ပိတ်ဆို့ခြင်း.
ချီကာဂိုတက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ရကျောင်းသားနှင့်စာတမ်း၏ ဦး ဆောင်ရေးသားသူမာ့ခ်အိုပါက“ serotonin 2C receptors ကိုရွေးချယ်ပိတ်ဆို့သောဒြပ်ပေါင်းများကိုအုပ်ချုပ်ပြီးနောက်အပြုအမူဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများတွင်အမြန်ပြုမူသောကုထုံးဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ “ ကျနော်တို့တိုင်းတာမှုကိုငါးရက်လောက်မှာစခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ဖြစ်နိုင်တာကအဲဒီ့ထက်စောပြီးထိရောက်မှုရှိနိုင်တယ်။
serotonin 2C receptors ပုံမှန်အားဖြင့်, လေ့အခြို့သောအာရုံခံကနေစိတ်ဓါတ်များနှင့်ဆက်စပ်အခြား neurotransmitter dopamine များလွှတ်ပေးရန်တားစီး။ 2C ပိတ်ဆို့နေသည်သောအခါ, သုတေသီများယုံကြည်ပို dopamine ထိုကဲ့သို့သော prefrontal cortex အဖြစ်ဦးနှောက်ဒေသများသို့ဖြန့်ချိသည်။ အဆိုပါအဖွဲ့သည်ကိုလည်းလက္ခဏာအရေးယူညွှန်ပြကြောင်း biomarkers ၏ induction လေ့လာတွေ့ရှိ.
ဤသည်လျှင်မြန်စွာ ketamine နှင့် scopolamine ကတည်းကစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေသက်သာနိုင်စွမ်းကိုပြသတော်မူကြောင်းကိုပထမဦးဆုံးအသစ်သောဇီဝယန္တရားဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်အလားအလာအများကြီးပိုလုံခြုံအခြားရွေးချယ်စရာကိုယ်စားပြုတယ်။ စျေးကွက်အပေါ်တချို့ကလက်ရှိစိတ်မကျဆေး Antidepressants ပြီးသားရွေးချယ်, serotonin 2C receptors ပေမယ့်မရထိခိုက်စေခြင်း, Dulawa လုံခြုံမှုပရိုဖိုင်းကိုလူ့အသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်သည်။ အဆိုပါအဖွဲ့သည်ယခုအခါလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေအဘို့သင့်လျော်သောဒြပ်ပေါင်းများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုရဲ့အဓိကအားသာချက်တစ်ခုကတော့၎င်းကိုဖော်ထုတ်ထားသည့်အခြားသူများထက် ပိုမို၍ အန္တရာယ်ကင်းသောပစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်သည်" ဟု Dulawa ကပြောကြားခဲ့သည်။
နောက်ထပ်အချက်အလက်များ -“ Serotonin 2C receptor antagonists များသည်လျင်မြန်သောစတင်ခြင်းစိတ်ကျရောဂါသက်ရောက်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်” Molecular Psychiatry, 2013 ။
ချီကာဂို Medical Center မှာတက္ကသိုလ်ကပေးအပ်
"အစာရှောင်ခြင်း - သရုပ်ဆောင်ဆေးဝါးများ၏အလားအလာသစ်ကိုလူတန်းစား။"အောက်တိုဘာလ 29, 2013 ခုနှစ် http: // medicalxpress.com/news/2013-10-potentiaဌ-class ကို-fast-သရုပ်ဆောင်-antidepressant.html